Shiinaha Soo-saareyaasha Dharka Dharka Xirfadlayaasha Takhasuska leh iyo alaab-qeybiyeyaasha | ORIENT
1. waa la neefsan karaa, la wadaagi karaa, antistatic, anti-oil,
Si wax ku ool ah looga hortago dhiigga, dheecaanka jirka iyo burburka kale ee burburka.
3.Ka hortagidda jireed ee fayraska, bakteeriyada iyo gudbinta sheyga
4.OEM / ODM waa la heli karaa
Magaca badeecada Goonida La Go'doomi Karo / Goonnada Difaaca
Cabirka badeecada M / L / XL / XXL, S / M / L / XL / XXL
Isticmaalka Qalabka Amniga Badbaadada
Qalabka pp + pe 73g
Nooca Badeecada EN14126
Asal ahaan Shiinaha (Dhul)
Qaabka MAYA. Dharka Dharka Shaqada ee Dharka Shaqada
Habayn OEM / ODM waa la heli karaa
Madhalays ka dhigida EO gaas / shucaac
Magaca Sumadda MEIYIMEI
Classifica qalab fasalka 1
Ilaalin naqshad dharka ilaalinta
Naqshadeynta 1.Hooden: Naqshadeynta madaxa hooden, naqshad jilicsan oo dabacsan, ayaa xannibi kara boodhka iyo calaamadaha;
Naqshadeynta 2.Zipper: Waa fududahay in la xidho oo la iska furo iyo xidhitaanka ugu fiican;
Cabbirka laastikada: Telescopic, caqabad wax ku ool ah oo si fudud loo isticmaali karo;
Naqshadeynta dhexda 4.Loose: Naqshadeynta dhexda laastikada, xirashada aad ugu habboon, si loo daboolo baahiyaha tirooyinka kala duwan.
Goonnada difaaca caafimaadka ee la tuuri karo ayaa si wax ku ool ah u go'doomin kara xaydha xumbada afka laga qaato ee shaqada iyo deegaanka kale ee ku xeeran. Saamaynta fiiqan ee fiiqan ee jajabyada birta, dhagxaanta la burburiyey, dawada kiimikada, iyo wiilka.
Maxaad u dooratay maradayada difaaca:
1. In ka badan 20 Sano oo khibrad ah soosaarka iyo adeegga goonnada ilaalinta
2. Tiknoolajiyaddu waa mid fiican oo qaan gaar ah
3. Khadka tooska ah ee wax soo saarka tooska ah
4. Dhar kala duwan oo kala duwan oo la soo saari karo
5. Xakamaynta tayada adag ee xinjirowga ilaalinta
Hore: Xirmada muunad qaadista fayraska ORIENTMED
Xiga: 3 wejiga maaskaro ee la tuuro oo ah nooca I, Nooca II, Nooca IIR